Mashiinnada qaxwada ugu jaban ee 2022 - Hagaha iibka iyo soo jeedinta
kafeega raqiis ah
Mashiinnada qaxwada ugu fiican
Noocyada mashiinnada qaxwada
Mashiinnada qaxwada kaabsulka ah
Mashiinnada qaxwada tooska ah ee super
Mashiinnada qaxwada Talyaaniga
kafeega korontada ku shaqeeya
Mashiinnada qaxwada warshadaha
kafeega iyo qalabyada
qalabka kafeega barista
Talooyin iyo tabaha
U diyaari cappuccino wanaagsan
Brew Qabow ama Kafee Baraf leh
Si fiican u isticmaal kafee-sameeyaha talyaaniga
Kafee kafee adiga oo aan lahayn kafee-sameeyaha
iibiyeyaasha ugu fiican
waxa kafeega lagu gato
Agabka iyo wax ka badan
Haddii aad jeceshahay kafeega (iyo faleebooyinka kale) oo aad ka fekereyso dooro kafeega ku haboon oo buuxiya baahiyahaaga waxaad ogaan doontaa in aanay inta badan fududayn sababtoo ah noocyada kala duwan ee suuqa ka jira awgeed. Oo haddii ay horeba u adag tahay in la doorto nooc kafeega kafeega ah, weli way adagtahay in la dhex maro inta u dhaxaysa tirada noocyada kala duwan iyo moodooyinka jira.
Isticmaalayaasha aan go'aansanin, boggan internetka waxaan isku dayi doonaa inaan ku baro wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u go'aansato nooca kafeega aad u baahan tahay sida aad doorbidayso, iyo sidoo kale, noocyada iyo moodooyinka lagu taliyay xaalad kasta. in aad hesho badeecada ugu macquulsan kiis kasta. Intaa waxaa dheer, tani waxay kaa ilaalin doontaa inaad ku bixiso lacag xad-dhaaf ah, hubinta inaad ku bixinayso qiimo caddaalad ah badeecad tayo leh.
Mashiinnada qaxwada ugu fiican ee suuqa
Haddii aadan rabin in aad naftaada u qallajiso ama aad hore u leedahay fikrad gaar ah, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay oo kaliya in aad ogaato waa kuwee mashiinada kafeega ugu fiican halkaas si aad u doorato kaaga. Soo koobid iyo iyada oo aan la takoorin nooc ahaan, tani waa sare ee mashiinada bunka jecel our:
QABYAALADAHA UGU SAREEYA
KUSOOSAA OTOMATIC AH
Dhadhanka ugu sarreeya
Bosch Tasimo Happy...
Noocyada mashiinnada qaxwada: waa maxay ku habboon?
Ma jiro hal nooc oo kafeega kafeega ah, haddii kale doorashadu waxay noqon doontaa mid aad u fudud. Waxaa jira cusub mashiinnada korontada kuwaas oo u kobcay si ay u bixiyaan natiijooyinka ugu fiican iyo raaxada ugu weyn, iyada oo aan si buuxda loo barakicin dheryihii qaxwaha dhaqanka. Sababtan awgeed, maanta waxaa jira labadaba mashiinnada qaxwada caadiga ah ee loogu talagalay nadiifiyeyaasha ugu badan, iyo sidoo kale kuwa ugu casrisan.
Si fiican u baro iyaga noocyada jira ee mishiinada kafeega Waa muhiim in la ogaado sida loo doorto kafeega ugu fiican iyadoo loo eegayo waxaad dhab ahaantii raadineyso. Waxaan halkan kuugu sheegaynaa dhawr eray:
ka kafeega korontada ku shaqeeya waa dhammaan kuwa bedelay ilaha kulaylka dibadda hababka kuleylka korontada si ay u diyaariyaan qaxwaha ama faleebo. Kafeega noocaan ah waa dhakhso badan oo wax ku ool ah guryaha intooda badan. Intaa waxaa dheer, uma baahna nadiifinta ama dayactirka sida kuwa dhaqanka ah. Kooxdan dhexdeeda waxaad ka heli kartaa:
Mashiinnada qaxwada kaabsulka ah: waa kuwa hadda jira, maadaama ay aad u fududahay in la isticmaalo oo si degdeg ah loo isticmaalo. Waxaad si fudud u doorataa kaabsulka qaxwada ama faleebada aad rabto inaad diyaariso (qaar ayaa kuu oggolaanaya inaad diyaariso cabitaan kulul iyo qabow), geli mashiinka, dhowr ilbiriqsi gudahood waxaad heli doontaa dhalada ama koobkaaga oo diyaar ah. Nidaamkeeda cadaadiska ayaa ka gudbi doona biyaha kulul ee kaabsalka si ay u soo saaraan dhadhanka iyo udgoonka waxa ku jira oo ku eryi doona galaaska/koobka.
Mashiinnada qaxwada tooska ah ee superMashiinnadani waxay kuu oggolaanayaan inaad doorato digirta qaxwaha ama kafeega dhulka (oo bixiya xoriyad weyn iyada oo aan ku xirnayn nooc ka mid ah kaabsal taageero), laakiin uma baahna feejignaan badan sidii kuwii hore. Caadi ahaan waa la joojiyaa wakhtiga saxda ah, adoon laftaadu joojin iyaga oo ay ugu wacan tahay nidaam garanaya inta la qabanayo. Intaa waxaa dheer, waxay badanaa leeyihiin hawlo kale oo dheeraad ah oo ku saabsan kuwii hore.
Mashiinnada espresso-ga gacanta: si ka duwan kuwa super-automatic-ka ah, ma haystaan ​​​​furaha iyo habka soo saarista iyo cadaadinta kafeega waa in lagu sameeyaa gacanta. Qaar ka mid ah waxay leeyihiin qalab lagu dhex dhisay si ay u uumi u soo baxaan, taas oo ah, inay kuu oggolaadaan inaad si toos ah u sameyso xumbo caano ah oo aad siiso qaxwaha qaabka gaarka ah ee xirfadlayaasha.
Ku-dhismay kafeega: inta badan waa mashiinada qaxwaha oo aad u toosan, kaliya waxay ku dhexjiraan jikada sida qalabyada kale, si la mid ah waxaa lagu samayn karaa mashiinka dharka lagu dhaqo, weel dhaqida, foornooyinka, microwaves, iwm.
Dhibcaha ama kafeega Ameerikaanka: Kuwani waa mashiinnada qaxwaha korantada ee caadiga ah oo isticmaala filtarrada la tuuri karo iyo isha kulaylka korontada. Waxaad isticmaali kartaa kafeega dhulka oo aad jeceshahay. Mashiinku wuxuu ka gudbi doonaa biyaha kulul ee kafeega dhulka wuxuuna sifeynayaa si uu natiijada ugu tifqdo weel isku dhafan. Xaaladdan oo kale ma aha monodose. Qaar ka mid ah waxaa ku jira weelka tarmuuska, si ay u kululeeyaan kafeega dhowr saacadood.
Kafeega korontada ku shaqeeya ee Talyaani: la mid ah muuqaalka iyo hawlgalka mashiinka qaxwaha Talyaaniga ama dheryaha Moka, laakiin ku shaqeeya il koronto. Maskaxda ku hay in mashiinno badan oo kafeega Talyaani ah aysan taageerin makiinada kicinta, markaa jiritaanka nooca korantada.
dheryihii qaxwaha dhaqanka
Waa kuwa ku sii tiirsan isha kulaylka dibadeed. Waxa la alifay sanado ka hor ilaa maantana way jiraan. Qaar badan oo kafeega jecel waxay door bidaan in ay sii wadaan diyaarinta kafeega mashiinka qaxwaha noocan oo kale ah, iyaga oo xakameynaya faahfaahin kasta oo xoqan oo fulinaya "caado" oo dhan ilaa ay ka helayaan qaxwaha qumman. Taasi waxay la macno tahay in aanay sida ugu degdegsanayn oo ay u baahan yihiin hab-socodka gacanta, markaa maaha kuwo qof walba loogu talogalay. Waxaa ka mid ah, la kala saari karaa:
Mashiinnada qaxwada Talyaaniga: waa mashiinnada qaxwada oo aad u fudud oo ka kooban haanta biyaha ee aagga hoose. Debaajigani waa kan saxanka la saaray si uu u kululeeyo oo biyuhu u karkariyo. Markaa waxay kor u kacdaa marin-biyoodka waxayna sii martaa shaandhada halkaasoo qaxwaha dhulka laga helo. Waxay soo saartaa udgoonka waxayna kor ugu kacdaa iyadoo horeba loo shaandhayn oo ku taal aagga sare.
cabbista kafeega: Sameeyaha kafeega waxaa loo ogol yahay inuu sameeyo kafeega iyo faleebo kasta oo kale. Waa inaad ku kululaysaa biyaha si ay u kariyaan microwave-ka ama digsiga, ka dibna ku dar gudaha gudaha makiinada kafeega oo ay la socdaan waxaad rabto inaad ku shubto. Waxaad xirtaa daboolka oo riix tuubada si ay biyaha dhadhanka leh u dhex maraan shaandhadaada oo ay sidaas uga baxaan saldhigga hoose.
Cona ama vacuum kafeega: Waa nooc kafeega samaysa oo aad u gaar ah oo la alifay sanado badan ka hor. Hawlgalkeedu, qayb ahaan, wuxuu la mid yahay mabda'a Talyaaniga. Coffee-gani waxa uu biyaha weelkiisa hoose ku kariyaa kulayl dibadda ah, sida dab ama dab-shidre, kaas oo balaadhiya gaaska oo ka dhigaya in uu kor u kaco isaga oo sii mara marin-biyood isku xidha labada qayboodba. Halkaas ayay ku taal kafeega lagu shubayaa. Marka laga saaro kulaylka, hawada aagga hoose ayaa qandaraaseysa waxayna abuurtaa saameyn faaruq ah, ka nuuga kafeega aagga sare iyada oo loo marayo filter. Natiijada kama dambaysta ah waxay noqon doontaa qaxwo diyaar u ah in la cabbo xagga hoose, ka tagista barxadda xagga sare.
Ugu dambeyntiina, the mashiinada qaxwaha warshadaha Waa qayb gaar ah. Guud ahaan, waxay ku dhex milmi karaan kuwa korantada, maadaama ay la shaqeeyaan nidaamka kuleylka korantada. Laakiin waa qaali, mashiinno waaweyn oo awood sare leh. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad si dhakhso ah u sameyso kafeega oo aad xitaa sameyso dhowr qaxwo oo isku mar ah xaaladaha qaarkood. Waxay ku habboon yihiin ganacsiyada martigelinta sida kafateeriyada, baararka, makhaayadaha, hoteellada, iwm, inkastoo ay jiraan kuwo badan oo u soo iibsada isticmaalka guriga.
kafeega ugu iibinta fiican
Ku sii socoshada waxa ilaa hadda la sheegay, kuwani waa qaar ka mid ah kafeega ugu fiican in aad ku iibsan karto sanadkan qiimaha ugu fiican ee lacagta, hoggaamiyeyaasha qaybahooda kala duwan marka loo eego noocyada kafeega ee aan hore u faahfaahinnay:
De'Longhi wuxuu abuuray mid ka mid ah mashiinnada qaxwada ugu fiican Kaabsoosha Dolce Gusto in aad ka heli karto Iyada oo leh awood 1500w ah iyo nidaam kuleyl degdeg ah si aadan u sugin hal daqiiqo si aad u diyaariso qaxwadaada markaad dareento. Iyada oo leh 15 bar oo cadaadis ah waxaad ka soo saari kartaa wax kasta oo ugu fiican kafeega ama kaabsal faleebo si aad u siiso dhadhanka ugu macquulsan.
Intaa waxaa dheer, waxay isku xireysaa haanta biyaha ee 0,8-litir, taas oo kuu ogolaaneysa inaad sameyso dhowr qaxwo oo aan dib u buuxin. Waxay u taagan tahay shaqooyin xiiso leh, sida diyaari cabitaano kulul ama qabow, dayactirka waa ka sahlan yahay abid mahad ka digaya marka ay tahay waqtigii la dhimi lahaa.
Soo saaraha talyaaniga ee mishiinada kafeega ayaa ka taxadaray naqshadaynta mashiinkan, iyada oo faahfaahinta birta aan la taaban karin iyo qaab qurxin doona goobta aad ku dhejiso qalabkan. Waxa kale oo ka mid ah shaqo joojinta socodka si toos ah loo joojiyo jetka, saxaarad is hagaajinaysa ee koobabka iyo muraayadaha nooc kasta ah, xidhid toos ah ka dib 5 daqiiqo oo dhaqdhaqaaq la'aan ah, iwm.
Soo saaraha caanka ah ee Krups ayaa abuuray mid kale oo ka mid ah mashiinnada qaxwada ugu fiican kaabsoosha nespresso oo aad ka heli karto suuqa qiimo jaban. Raaxada ugu badan ee mashiinkan cufan iyo midka fudud, oo leh gacan ergonomic ah iyo midab soo jiidasho leh.
Waxay leedahay badhan lagu shido, oo kaliya Saacadaha 25 Waxay noqon doontaa mid diyaar ah oo leh biyaha heerkulka saxda ah si loo diyaariyo qaxwo aad u fiican. Dhammaantood waxaa lagu quudiyay haan mug leh oo ah 0.7 litir, oo leh cabbir cabbirka koob oo badhamada (Espresso iyo Lungo), gaaban ama dheer.
Awoodeeda iyo cadaadiskeeda 19 bar Waxay dammaanad qaadayaan inaad ka soo saari karto dhammaan udgoonka digirta kafeega dhulka ee kaabsal, iyo sidoo kale guryaha laga filayo koob kafee ah oo wanaagsan. Cadaadis leh wax yar oo ka hinaaso mashiinnada qaxwada ee xirfadlayaasha ah.
Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay nidaamka ka-hortagga faleebada, iyo nidaamka xidhitaanka otomaatiga ah haddii aad ka tagto adigoon isticmaalin wax ka badan 9 min.
Bosch TAS1007 Tasimo
Hadaad doorbideyso Kaabsoosha TassimoSoo saaraha Bosch sidoo kale wuxuu bixiyaa mid kale oo ka mid ah mashiinnada kafeega kaabsal ugu fiican ee shirkaddan la isticmaalo. 1400w oo koronto ah, haan 0.7 litir ah, iyo naqshad is haysta oo soo jiidasho leh ayaa kaabaya mashiinkan si loogu shubo.
Iyada oo aad ku raaxaysan kartaa dhadhanka xulashada in ka badan 40 cabitaan kulul oo dhan dhadhan asalka ah. Meelo adag ma jiraan, kaliya dooro kaabsal-ka aad rabto, taabo badhanka oo sug inta koobkaaga ama muraayaddaadu diyaar u yihiin (oo leh taageero la hagaajin karo oo cabbirro kala duwan ah).
Iyo in la ilaaliyo kafee nadiif ah iyo in dhadhanka aysan isku darin, ka dib markii la isticmaalo kasta kafeega wuxuu leeyahay nidaamka nadiifinta uumiga cadaadiska si uu ugu tago diyaar u ah inuu diyaariyo cabitaan kale oo kala duwan isla markiiba.
Bosch TAS1007 Tasimo...
Mid kale oo ka mid ah noocyada waaweyn ee Yurub waa Philips. Markan waxa uu haystaa nooc kafeega sameeya kaabsoosha dareenka in aad jeclaan doontaa Lagu heli karo naqshad cusub iyo midabyo badan si aad u doorato midka ugu habboon ee ku habboon dhadhankaaga.
Waa kafee-sameeyaha gaarka ah, tan iyo inkastoo ay tahay hal-dose waxay kuu ogolaaneysaa inaad diyaariso laba koob oo kafee ah isku mar. Wax walba si dhakhso ah oo fudud, xulashada xoojinta kafeega dheer, jilicsan, gaaban iyo xoogga leh ee aad rabto wakhti kasta oo aad sugto natiijada degdega ah.
La Farsamaynta Kobcinta Kafeega waxay hubisaa inay soo saarto dhammaan dhadhanka kaabsal kasta cadaadiskeeda, dammaanad qaadida dhadhan fiican. Intaa waxaa dheer, tignoolajiyada Crema Plus waxay hubisaa in lakabka kareemku uu ka fiican yahay oo uu leeyahay muuqaal ka fiican marka loo eego mashiinnada kafeega kale ee korontada. Haddii aadan isticmaalin, tignoolajiyadeeda tamarta-badbaadinta ayaa si toos ah u damin doonta 30 daqiiqo gudahood.
Oroley 12 koob
Oroley Waa mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee aad ka iibsan karto noocaan oo kale ah kafeega talyaaniga. Dad badan ayaa door bida in ay ku diyaariyaan kafeega noocaan ah kafeega dhaqameed sababtoo ah waxay yiraahdeen waxay jecel yihiin dhadhankiisa. Waxay kaloo yihiin waara oo raqiis ah.
Waa ka samaysan aluminium, oo ku habboon dhammaan noocyada jikada, marka laga reebo kicinta. Haanta biyuhu waxay qaadi kartaa 12 koob, inkastoo ay jiraan cabbirro kala duwan oo daboolaya baahiyo kala duwan. Waxa kale oo ku jira waalka badbaadada si looga hortago shilalka.
A classic dhab ah oo lagu raaxaysto kafeega sidii hore, dhageysiga gurguurta iyo neefsashada udgoonka. Lagama waayi karo gurigaaga iyo marka lagu daro diyaarinta qaxwo macaan, Mashiinnada qaxwada Talyaanigu waxay ku daraan taabasho gaar ah taasi ma noqon doonto mid aan la dareemin oo waxay siin doontaa shakhsiyad badan jikadaada.
Oroley - kafee...
Haddii aad door bidayso mid kafeega si toos ah u toos ah, mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee aad ka heli doonto waa Talyaani De'Longhi Ecam Magnifica, oo leh cadaadiska 15 bar, awoodda 1450w, taangiga awoodda 1.8 litir ee laga saari karo, guddiga LCD si loo eego macluumaadka, nidaamka cappuccino, qaybiyaha qaxwaha la hagaajin karo ee cabbirro kala duwan, iyo nadiifinta tooska ah.
Shaki la'aan, tani waa mid ka mid ah mashiinnada qaxwada ugu sarreeya. Qadarka hawlaha ay keenayso waa mid cajiib ah oo dhamaadka qaxwaha ayaa si fudud u macaan. qaxwo cusub oo la shiiday Thanks to Booqday Furimaha Dagaalka tooska ah ee ugu sarreeya iyo heerka ugu sarreeya marka ay timaado shakhsiyeeyo kafeegaaga.
Kafeega gurigaan wuxuu bixiyaa wax ku saabsan natiijooyinka xirfadeed in aad jeclaan doonto haddii aad tahay qof jecel kafeega wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waxay kuu ogolaaneysaa inaad diyaariso laba koob oo kafee ah isku mar. Oo iyada oo aan ku xidhnayn kaabsal, waxay kuu ogolaanaysaa inaad doorato qaxwada aad jeceshahay.
Shirkadda De'Longhi waxay sidoo kale bixisaa nooc kale oo aad u wanaagsan haddii aad raadinayso wax wanaagsan cudud kafeega guriga. Kafee-sameeyahan waxaad heli doontaa qaxwo macaan oo ay ugu mahadcelinayso awoodda ay bixiso 1350 W iyo cadaadiskeeda sare iyada oo ay uga mahadcelinayso bamka dhaqameed ee cidhiidhiga ah ee 15 cm.
Wuxuu isku daraa habka Thermoblock si uu biyaha ugu kululeeyo heerkulka saxda ah 35 ilbiriqsi gudahood. Waxay la shaqeysaa qaxwo kasta oo dhulka ah iyo "Easy Serving Espresso" pods, si ay kuu siiso xoriyad weyn markaad dooranayso alaabta. Sidoo kale, mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan waa adiga cudud leh 360º wareeg ah "capuccinatore" si aad u hesho xumbo caanaha ugu fiican iyo cappuccinos sida haddii aad tahay barista xirfad leh.
sharad badbaado leh mid ka mid ah qiimaha ugu fiican ee lacagta loogu talagalay dhammaan dadka ku raaxaysan habka diyaarinta qaxwada.
De'longi Dedicated -...
Mashiinnada kafeega tooska ah ee ugu iibinta badan waxaa ka mid ah Oster Prima Latte, maadaama ay leedahay qiimo si cadaalad ah loo hagaajiyay oo ah waxa ay runtii bixiso. diyaarin kara cappuccinos delicious, lattes, espressos, iyo sidoo kale caano uumi si aad u hesho xumbo wanaagsan.
Waa mashiinka espresso khuraafaad ah, jecel yahay website-yo badan iyo kafeega jecel dhadhanka waxay ku siinaysaa qiimo aad uga hooseeya mashiinada kale ee qaaliga ah.
Waxay leedahay haanta biyaha Awoodda 1.5 litir, iyo haan kale oo 300 ml oo caano ah. Waxay si dhakhso ah u kululaan kartaa iyada oo ay ugu wacan tahay 1238 W ee awoodda.
Leh a Cadaadiska 19 bar si loo soo saaro ugu badnaan kafeega, sidoo kale siinaya wax badan oo kareem ah natiijada. Oo aad bay u fududahay in la nadiifiyo, xitaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka saarto haanta caanaha si aad ugu kaydiso qaboojiyaha.
Waxaa jira version labaad ee mishiinka, ah Oster Prima Latte II, oo leh awood iyo karti weyn, iyo in kasta oo nadiifiyeyaasha ay wali doorbidaan asalka, weli waa sharadka xiisaha leh.
Tani Cecotec kafeega korontada ku shaqeeya Waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan gudaha noocaan. Soo saaraha caanka ah ee robots-ka gudaha ayaa sidoo kale sameeya mashiinnada qaxwada oo leh naqshad qurux badan, isku dhafan, iyo natiijooyin aad u wanaagsan marka loo eego tartamayaasha tooska ah.
Waxay leedahay awood 1350w si ay u kululeyso biyaha faleebooyinka, Thermoblock si ay u dhaqso badan tahay, 20 bar Cadaadiska si aad u hesho kareemka ugu fiican iyo udgoonka ugu sarreeya sida mashiinnada qaxwaha ee xirfadlayaasha ah, waxaa ku jira uumi si aad u nuujiso caanaha oo aad u hesho xumbo ugu fiican, waxay u oggolaaneysaa biyaha kulul in la soo saaro si loo diyaariyo faleebo, taangiga awoodda 1.2-litir, iyo nadaamka ka hortagga faleebada.
Hadaad kamid tahay kuwa doorbida American ama kafeega faleebo, Jarmal Melitta waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aad iibsan karto. Waa kafeeye filter koronto ah, oo leh awood 1000w (class A hufan), awood ah 1.25 litir, oo ka samaysan bir aan kala go 'lahayn.
Koobab kafeega dheer ama gaaban oo dhadhan fiican leh oo aad ka dooran karto, oo leh tarmuus ilaalin kara kafeega kulaylka 2 saacadood iyada oo ay ugu wacan tahay dahaarka isothermal ee weelkiisa. Waxa kale oo ka mid ah dabool, haye shaandhaynta faleebada, waafaqid filtarrada 1 × 4, gacanta, barnaamijka descaling, hagaajinta engegnaanta biyaha, waana makiinada weelka dhaqa oo badbaadsan.
Cabirka Cona D-Genius
Waa waxa dhabta ah Cona kafeega, ama faakuumka. Waxaa jira kuwo kale oo badan oo la mid ah suuqa oo isku dayaya in ay ku daydaan, laakiin tani waa kan kaliya ee ilaalinaya naqshadda asalka ah ee kafeega dhaqameed, iyo sidoo kale xaqiiqadiisa, maadaama ay wali soo saarto shirkadda Cona.
Lagu sameeyay Yurub, oo leh laba konteenar oo galaas borosilicate u adkaysata shoogga kulaylka iyo nidaamka dhabta ah ee soo saari doona dhammaan udgoonka iyo hantida qaxwada iyada oo ay ugu wacan tahay saameynta nuugista vacuum ee sifeysa.
Lahaanshaha kafeega Cona waa ganacsi halis ah, astaanta guud ee qaabka iyo shakhsiyadda. Taasi waa sababta aan kugula talineyno inaad ka cararto ku dayashada oo aad raadiso Cona asalka ah. Qiimaheedu waa ka sarreeyaa, laakiin shaambada waa lama taabtaan.
Haddii aad doorbidayso inaad isticmaasho cabbista kafeega, Bodum waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican uguna jaban ee aad iibsan karto. Kafeega ayaa leh weel galaas borosilicate xoog leh, Awoodda lagu diyaariyo 8 koob markiiba, iyo tuuji leh filtar isku dhafan.
Kulayl biyaha ilaa inta ay karsanayaan, ku dar kafeega dhulka ama faleebada aad rabto inaad ku diyaariso kafeega, u daa in ay geliyaan oo riix tuubada si ay shaandhayso dhammaan samooyinka oo ka daa iyaga oo gadaasha ku xayiran. Sidan ayaad isla markiiba ku heli doontaa cabitaankaaga.
Kafeega noocaan ah wuxuu xasuusin doonaa in ka badan mid ka mid ah awoowyaashaa, waana ay tahay raqiis ah, la maarayn karo, si sahlan loo rari karo taasina waxay sidoo kale u adeegtaa samaynta faleebo nooc kasta ah.
Bodum 1913-01 kafee...
Lelit waa mid ka mid ah soosaarayaasha ugu caansan ee mashiinnada qaxwada tooska ah warshadaha huteelka. Iyada oo ay fududahay in la nadiifiyo birta aan fiicnayn, Booqday Furimaha Dagaalka ee kafeega isku dhafan, haanta biyaha ee 3.5 litir, 1200 W oo awood ah, iyo nidaam cadaadis sare leh.
Waxay leedahay waalle 3-daad ah oo lagu qallajiyo budada kafeega, koox madax ah si aad u diyaarisid hal qaxwo markiiba, iyo kilsi naxaas ah. Waxay ku habboon tahay labadaba digirta kafeega, kafeega dhulka, iyo sidoo kale kafeega. Intaa waxaa dheer, waxaa ka mid ah nidaamka si uumi u soo saaro xumbo wanaagsan.
Sida sumadda lafteeduba tilmaamayso, kafee-sameeyaha "kaliya kuwa jecel qaxwada": oo gebi ahaanba ka samaysan bir, Dhamaystirkiisu waa mid cajiib ah, shaqadeeduna waa meesha ugu sarreysa ee kafeega ugu baahida badan.
Sida loo doorto kafee-sameeyaha: tallaabo tallaabo kooban oo kooban
Haddii ay kuu muuqato in arrimuhu ay adag yihiin, waxaan isku dayi doonaa inaan fududeyno habka doorashada kafee-sameeyaha si ay u iibsadaan. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad maskaxda ku hayso waa waxaad raadinayso si aad u ogaato waxaad u baahan tahay. Wax u muuqda mid muuqda, laakiin taasi ma fududa ficil ahaan. hadda ka fikir dooro nooca xaqa aad rabto si aad u diyaariso dheriga qaxwada mustaqbalka:
Kafee kaliya: Waa inaad kala doorataa mid ka mid ah Nespresso, Senseo, Talyaani, la isku dari karo, cudud, super-automatic, drop ama American, Cona, iyo kaabsal warshadeed (haddii ay tahay ganacsi). Gudaha tan, waxaad yareyn kartaa fursadaha iyadoo loo eegayo haddii aad rabto raaxo badan ama ka yar:
Automático: Kaabsoosha Nespresso, Senseo, midaysan, cudud, super-atomatik ah.
BuuggaDhibco ama Maraykan, Cona, ama warshadaha.
Faleebo kale (shaaha, chamomile, liin liin, valerian, ...)Waa inaad kala doorataa Dolce-Gusto, Tassimo, ama kafee-sameeyaha. Sida kiiskii hore, waxaad yareyn kartaa fursadaha xitaa in ka badan:
AutomáticoKaabsoosha Dolce-Gusto ama Tassimo.
Marka aad si cad u qeexdo nooca mashiinka ama kafeega aad u baahan tahay si waafaqsan waxaad rabto inaad diyaariso, waxaad arki kartaa jaantuska soo socda si aad u go'aamiso waa kuwee kala duwanaanshaha nooc kasta oo kafeega kafeega, oo sidaas ku dhammeeya doorashada mid gaar ah:
Kaabsoosha: degdeg ah, fudud oo la taaban karo.
Nespresso: natiijadu waa qaxwo aad u daran, oo leh jir aad u wanaagsan iyo caraf udgoon, iyo sidoo kale qaabka saxda ah. Kaabsoosha ayaa aad u xaddidan marka loo eego Dolce-Gusto ama Tassimo, maadaama aad kaliya ka heli karto kafeega, noocyo kala duwan, laakiin taas kaliya.
Dolce GustoLammaanaha: qaxwo aad u daran, udgoon wanaagsan, xumbo wanaagsan iyo muuqaal. Iyada oo noocyo kala duwan oo kaabsal ah oo kafeega ah oo noocyo kala duwan ah (espresso, spotted, cut, decaffeinated,...), iyo sidoo kale shaaha caanaha, shaaha qabow, iyo cabitaano kale oo kulul iyo qabow.
Tassimo: Inkasta oo tayada aysan u sarreyn sidii labadii hore, waxay bixisaa natiijooyin isku mid ah. Intaa waxaa dheer, kaabsoosha in aad ka heli kartaa waa mid aad u kala duwan, sida kiiska Dolce-Gusto. Laga soo bilaabo qaxwaha aadka u kala duwan ilaa faleebo iyo cabitaannada xafladaha kale ee caanka ah. In ka badan 40 nooc oo kala duwan, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican haddii aad raadineyso noocyo kala duwan oo ka sarreeya wax kasta oo kale.
Senseo: waxay u dhacdaa sida Nespresso, way ka xaddidan tahay noocyada kala duwan. Kafeega kiiskan tayada ayaa la mid ah kan Tasimo.
Superautomatic, cudud ama la isku dari karo: saddexdan natiijadoodu siman tahay. Coffee la mid ah kuwa laga helay gudaha mashiinada qaxwaha warshadaha xirfadeed, iyo faa'iidada cududda uumiga si aad u abuurto xumbo tayo sare leh oo aadan ku guuleysan karin kaabsal, ama kuwa kale oo koronto ama dhaqameed.
koronto kale: Ameerikaanka ama qaxwaha dhibco, marka lagu daro in aysan u fududaan oo dhaqso u ahayn kuwii hore, natiijada kafeega waa mid aad u nadiif ah, taas oo u oggolaanaysa udugga iyo dhadhanka kala duwan in la qiimeeyo. Iyadoo ay taasi jirto, kuwa jecel kafeega wanaagsan ma qadariyaan iyaga. Taa beddelkeeda, waxay u fiicnaan karaan kuwa raadinaya wax raqiis ah, oo leh xorriyad ay ku isticmaalaan qaxwo kasta, oo isla markiiba sameeya xaddi badan oo kafee ah oo aan keligeed adeegin.
dhaqan: geeddi-socodku uma fududa sidii kuwii hore. Waa inaad gacanta ku qabataa habka tallaabo-tallaabo ilaa aad ka helayso natiijada.
Talyaani: waxay kuu oggolaanayaan inaad diyaariso qaxwo wanaagsan oo leh caraf aad u cad. Iyagu sidoo kale waa raqiis oo ma adag in la isticmaalo, inkastoo habka uu yahay mid gaabis ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso wax ka badan hal koob markiiba iyadoo ku xiran xajmiga.
kolayga: haddii ay yihiin Cona saxda ah, natiijadu aad bay u wanaagsan tahay. Adigoo ku shubaya kafeega heerkul ka hooseeya kuwa kale (qiyaastii 70ºC), tani waxay ka dhigaysaa kafeega inuu ilaaliyo sifooyinka organoleptic ka fiican noocyada kale.
tuugta: Waxay bixin karaan natiijooyin la mid ah kuwii hore. Awooddooda ugu weyni waa inay aad u jaban yihiin oo ay ku habboon yihiin dadka da'da ah ee aan garanayn sida loo isticmaalo kuwa casriga ah ama aan rabin inay noloshooda ku adkeeyaan.
Warshadaha: ganacsiyada, gaaritaanka dhadhanka xirfadeed iyo textures sababtoo ah sifooyinka ay bixiyaan. Way ka qaalisan yihiin kana weyn yihiin. Noocyada noocaan ah mishiinada espresso waa buug-gacmeed, in kasta oo ay sidoo kale jiraan kuwo aad u toosan.
Waa maxay kafeega la iibsanayo?
Iyadoo ku xiran nooca kafeega aad isticmaashid, waxaad u baahan doontaa hal qaxwo ama mid kale. Waxaa laga yaabaa in xitaa kafeegaagu uu taageero noocyo badan oo kafeega ah. Mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu leeyahay siyaalihiisa iyo tabaha. Ma garanaysaa inta nooc ee kaabsoosha kafeega jira? Waa maxay sirta ah in la doorto kafeega dhulka ugu fiican? iyo haddii aad iibsato digirta qaxwahaSidee si fiican loo shiidi karaa?
Qalabka kafeega: waxyaabaha daruuriga ah
Dunida kafeega waa mid aad u ballaaran oo haddii aad jeceshahay cabitaankan ma joojin doontid inaad la yaabto tirada fursadaha la heli karo waayo-aragnimada kafeega u beddel wax gaar ah. Qaar badan xitaa waa caado. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro ka mid ah accessories kuwaas oo u muuqda mid muhiim ah: caanaha caanaha si loo gaaro heer sare creamness, Furimaha Dagaalka kafeega for texture qumman ama tarmuusyada si aad u ilaaliso oo u qaado qaxwadaada. Baadhid.
1 Mashiinnada qaxwada ugu fiican ee suuqa
2 Noocyada mashiinnada qaxwada: waa maxay ku habboon?
2.1 kafeega korontada ku shaqeeya
2.2 dheryihii qaxwaha dhaqanka
2.3 Mashiinnada qaxwada warshadaha
3 kafeega ugu iibinta fiican
3.3 Bosch TAS1007 Tasimo
3.5 Oroley 12 koob
3.11 Cabirka Cona D-Genius
3.12 bodum hoostiisa
4 Sida loo doorto kafee-sameeyaha: tallaabo tallaabo kooban oo kooban
5 Waa maxay kafeega la iibsanayo?
6 Qalabka kafeega: waxyaabaha daruuriga ah
Mashiinnada kafeega Cona iyo mashiinnada qaxwada faakuumka
Mashiinnada qaxwada Bialetti
Mashiinnada qaxwada Bosch
Mashiinnada qaxwada Cecotec
Mashiinnada kafeega Dolce Gusto
Mashiinnada qaxwaha Illy
Krups mashiinada qaxwada
Mashiinnada qaxwada Lavazza
Mashiinnada qaxwada Melitta
Mashiinnada qaxwada Nespresso ee jaban
Mashiinnada qaxwada Orbegozo
Mashiinnada qaxwada ee Philips
Mashiinnada qaxwada Saeco
Mashiinnada qaxwada Senseo
Mashiinnada qaxwada ee Smeg
Mashiinnada qaxwada Ufesa
Noocyada kaabsal kafeega
Mashiinnada qaxwada jaban 2022 - Siyaasadda Asturnaanta - Contacto